Raadinta Visio ... aka ... Dadku Waxay La Yaaban Yihiin Sababta Aan Mac Ugu Maqanahay | Martech Zone
Jimce, Maarso 28, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dadku waxay la yaaban yihiin sababta aanan u isticmaalin Microsoft sida ugu badan ee aan hore u isticmaali jiray. Dadka qaar waxay u maleynayaan in waxa PC / Mac oo dhan ay yihiin kaftan kaliya. Waxaan u maleeyay PC iyo Mac wax waliba waxay ahaayeen kaftan, sidoo kale. Waa ma. Waxaan ku jiray Mac hadda si rasmi ah hal sano.
Aniguna waa kharribmay.
Waxa ugu xun ee ku saabsan ka shaqeynta Mac waa inuu ka shaqeeyo PC sidoo kale. Sidaas ayaan ku sameeyaa maalin kasta shaqada. Waxaan dhawaan soo raray Vista (wali waa bluescreens ka dib hurdo la'aan) waxaana u baahday inaan soo dejiyo oo dib loo rakibo Microsoft Visio Standard Edition. Si fudud, sax? Waxaan ka iibsaday Microsoft khadka tooska ah sidaa darteed waan tagayaa oo markale ayaan soo dejinayaa, oo dib ayaan u soo dejinayaa.
Waxaan aadaa meesha macquul ah, Microsoft Download Center. Waxaa jira aaladda 'Silverlight beta' ee Xarunta Soo-dejinta Microsoft si aan ugu tago! Waxaan si fudud ugu qoraa "Visio" berrinka "raadinta soo degsashada". Waa tan waxa ugu horreeya ee la yimaada natiijooyinka 119:
Muxuu yahay natiijada ugu horreysa ee la qiimeeyay? Waxba kama ahan Visio… waa kan 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Keydso sida PDF ama XPS. Huh? (Xitaa iskuma dayi doono inaan ogaado sababta natiijada ugu horeysa u noqotay darajada # 31). Marka, waan aqriyay oo kala-saaray oo aqriyay oo kala-saaray oo ballaadhiyey si aan u muujiyo natiijooyinka 100… Ma heli karo Visio meel kasta… kaliya qaar ka mid ah daawadayaasha iyo koox kale oo xariif ah.
U tag goobta Xafiiska! Tan iyo markii aan ka iibsaday Visio khadka tooska ah, waxaan is tusay inaan awoodi doono inaan dib ugu laabto bakhaarka anigoo adeegsanaya Microsoft. Wax yar baan foorarayaa, laakiin waxaan ka helayaa Edition Visio Standard Edition. Iyo dhinaca bidix… Iibsigii hore! Yahoo !!!!… er… Waxaan ula jeedaa Wahooo !!! Waxaan gujinayaa Iibsigii hore oo lambarkayga qaansheega ayaa soo baxaya. Haa !!!! Ku dhowaad halkaas !!!! Waxaan gujinayaa iibsashada waana tan waxa aan helayo:
Xaashida Waxaan isticmaalayaa Internet Explorer 7 xitaa… xitaa khatar uma gelinayo midkan Firefox. Waxaan nadiifiyaa buskudkayga. Dib ayaan ulaabtaa, riix qaansheegta… iyo….
Waxaad nuugtaa Microsoft! On iyo ka baxsan webka… waad nuugtaa! Hadda ma awoodo in mashruucayga maanta lagu dhammeeyo softiweerka waan ka xumahay inaad iga dhigtay mid casriyeyn ah oo igu kiciyey $ 150 doollar oo kale oo aanan soo dejin karin oo aan isticmaali karin.
Dadku runtii way yaaban yihiin sababta aan u ahay Mac.
Layaab ma leh sababta Microsoft Brand uu hoos ugu dhacayo. Waxaan la yaabi lahaa inaan barto in shaqaalaha Microsoft ay tahay inay xitaa adeegsadaan alaabtooda, khadka tooska ah ama khadka tooska ah.
Haa, waan ka jiran ahay M $ cunug sidoo kale. Waxaan dhawaan ka booday markabkii 'Outlook 07' waxaanan aaday Mozillas Thunderbird .. Waan ku faraxsanahay. Sidoo kale raac inaad rakibo xafiis furan dhawaan si aad uga takhalusto inta kale ee qashinka xafiiska M $ ah.
Runtii waxaan ka fiirsanayaa samaynta boodboodka iyo inaan u adeegsado wax aan ahayn Linux oo ku shaqeeya mishiinnadayda hadda. Waxay noqotay adeegsi saaxiibtinimo sida ugu dambeysa iyo barnaamijyada winblows badankood waxay leeyihiin maalmo la mid ah kan la midka ah ee la jaan qaada.
Ma hubo Haddii aan geesi ku ahay inaan helo mac tho.
Maxaa qaraw !!! Microsh * te! Markaan dad baranno…. Microsoft waxay la kulmi doontaa dhibaato REAL ah markii bulshada shirkadu si lama filaan ah u ogaato inay waqti iyo lacag badbaadin doonaan markay u wareegaan Mac oo ay joojiyaan adeegsiga alaabada Microsoft.
Hase yeeshe, markii aan akhriyay maqaalka, xayeysiiskaaga xayeysiiska Google ee hoose ee gelitaankaada wuxuu leeyahay xiriiriyeyaal lagu iibsado Xafiiska 2003 iyo 2007.
Iyo xayeysiiska Mac ee dhinaca, oo lagu dhex daray xafiis kale oo lagu daro.
Mararka qaar runtii waa wax lagu farxo sida koodhka xayeysiinta otomaatiggu u soo bixi karo waqtiyada ugu xiisaha badan. Qoraalkaaga oo ay weheliso xayeysiisyada "waqtiga ku habboon" ayaa sameeyay fiidnimadayda 🙂
Ha! Taasi had iyo jeer waxay umuuqataa inay tahay kiiska, Bob! Mar kasta oo aan qof qarxiyo, xayeysiisyadooda ayaa ku soo kordha goobta. Aad u qosol badan.
Open Office halkan ayuu joogaa 2.4 iyo 3.0 waxay noqoneysaa xitaa hal talaabo oo kafiican. Waxa kale oo jira kordhin si qofku u isticmaali karo LaTeX maalmahan…
Kaliya isticmaal OmniGraffle Pro. Visio si kastaba ha noqotee waa ubax-tastic.
Apr 1, 2008 at 1: 38 PM
Waxaan nasiib wacan ku helay OmniGraffle Pro sidoo kale, Jason. Waxaan jeclaan lahaa inay si buuxda faylka ula jaan qaadi karto Visio (ama dhinaca kale), in kastoo! Waxaan hayaa macaamiil isticmaala Visio.
Waad ogtahay in Mac uusan xumaan laheyn hadii uusan ahaan laheyn dadka Mac oo dhan. ” 😉
Apr 1, 2008 at 1: 39 PM
Ha! Xaqiiqdii waad saxantahay, Mike. Waxaan nahay farabadan cranky - gaar ahaan dadka sida aniga oo kale ah oo qoto dheer ku ahaa teknoolojiyada MS labaatankii sano ee la soo dhaafay!
Apr 1, 2008 at 12: 53 PM
Dhibaatooyin aad u yar ayaan kala kulmay alaabada Microsoft. Oh, dhibaatooyin badan ayaan kala kulmay khadka tooska ah, laakiin ma jiraan wax muhiim ah. Sababtoo ah kalsooni darrada guud ee internetka, waxaan doorbidaa inaan haysto nuqullo adag dhammaan barnaamijyada aan iibsado, gaar ahaan markay qaali yihiin. Dugsi hore, waan ogahay.
Waa wax lagu qoslo, laakiin dhibaatooyin badan ayaan kala kulmay Mac-yada iyo Linux-ka marka loo eego Windows-ka, barnaamijyada il furanna weligood uma muuqdaan inay ila shaqeynayaan. Xaqiiqdii maahan aqoon la'aan farsamo (Waxaan isticmaali jiray kumbuyuutaro tan iyo maalmihii DOS).
Sidoo kale, maxay dadku u beddelaan jilayaasha marka ay qorayaan "Microsoft"? Waxaan ula jeedaa, maahan in haddii dhab ahaan loo qeexayo ay si uun u kordhinayso Bill Gates 'awood la'aanta xukunka adduunka. Waxay u egtahay nacasnimo.
Apr 1, 2008 at 1: 48 PM
Qoraalkani wuxuu ahaa hawo weyn oo weyn oo ku saabsan jahwareerka aan ka qabo boggooda. Waxaan u maleynayaa in isku xirnaanta ay tahay in Microsoft xoogaa ka go'antahay isticmaaleyaashooda. Arrinkeygu kuma saabsaneyn barnaamijka softiweerka (markan;), runti wuxuu ku saabsanaa adeegga macaamiisha.
Ilaa inta aan xasuusto, waligeed sidaas ayey ahayd. Microsoft wax xoogaa lama soo dhoweyn karo waxayna tilmaamtay jihada… waxyaabo ay ka mid yihiin yeelashada biraawsar aan dhaqangalin heerarka, dhisida moodooyinka amniga ee la shaqeeya kaliya barnaamijyada ku saleysan Microsoft, iyo iska indha tirka heerarka kale - sida heerarka dukumintiga.
Waxaan ixtiraam badan u hayaa wixii ay gaareen, laakiin waxaan aaminsanahay cadaawada ay u qabaan qof kasta oo kale oo booska jooga inay ka helayaan sida ugu fiican iyaga. Hal fiiri fiidiyowga Steve Ballmer ayaa aniga ii qeexaya!
Ha igu qaldan, Shaqooyinku waxay leeyihiin jilitaankiisa, sidoo kale. Isagu waa jackass haddii aad aqriso joornaalka ugu dambeeya ee Fiire. Laakiin waxaan u maleynayaa in dareenkiisa uu sifiican diirada u saaray badalida xaalada taagan iyo isku dayga in wax looga fududeeyo uguna qurxoonaado 'cibaadadiisa'.
Apr 14, 2008 at 4: 59 PM
Kaliya ogeysiis, Microsoft waxay dabagal ku sameysay emayl ku saabsan soo dejintayda maanta, 4/14/2008 oo leh xiriiriye soo degsasho iyo fure alaab ah oo lagu rakibo.